SADC Troika Inoti VaZuma Varambe Vari Mutongi Gava Panyaya yeZimbabwe
Nyamavhuvhu 17, 2011
Sangano reSADC troika neChipiri manheru rakaita musangano wechimbichimbi kuLuanda, Angola wekuzeya nyaya yeZimbabwe rikasimbisa kuti mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vacharamba vari mutongi gava panyaya yeZimbabwe kunyange hazvo veZanu-PF vari kuti havachavada.
Vakaoma musoro muZanu-PF vari kutsika madziro kuti vazuma havangaite mutongi gava uye vachiitazve sachigaro weSADC troika sezvo vanenge vapfeka nguwani mbiri. Munyori weSADC, VaTomaz Salomao, vakazivisawo vatori venhau kuti vatungamiri venyika dziri mutroika vakasimbisawo nyaya yekuti patarwe zuva resaudzo muZimbabwe uye kuti zvibvumirano zviri mugGlobal Political Agreement, zvitevedzerwe.
Vakati musangano wetroika wainge wakanangana nekuti vobatsira sei kunyukura Zimbabwe mumadhaka mairi. Nyika dziri mutroika iSouth Africa, Mozambique neZambia. Mutungamiri weZambia, VaRupiah Banda, havana kukwanisa kuenda nenyaya yesarudzo yavatarisana nayo munyika mavo.
Asi vange vakamiririrwa nemutevedzeri wemutungamiri wenyika iyi, VaGeorge Kunda. Mozambique iri kusiya nhasi kuvanhengo yetroika iyi.
Vane ruzivo nezviri kutika vanoti VaKunda vakamirira VaBanda neChipiri manheru vakatura kuvakuru veSADC gwaro rinoratidza kuti kunyange zvichiri kunetsa kuzadzikisa zvimwe zvibvumirano zveGPA, mapato matatu ari muhurumende yemubatanidzwa ari kutenderana panyaya yekuti bumbiro remitemo rinopera riinhi uye zuva resarudzo kunyange veZanu-PF vachiri kuti dziitwe gore rino.
Gwaro raVaZuma rinotiwo vachaedza kuramba vachiyananisa panyaya yekugadzirisa misariridzwa yeGPA. VaClifford Mashiri nyanzvi munyaya dzekudyidzana nedzimwe nyika vanoti zvakakosha kuti VaZuma vapedze basa ravakatanga.